Iindaba-Intsomi 0f Ebike Wattage
Phantse yonke ibhayisekile yombane yokuthengisa kunye nekhithi yokuguqula i-ebike idweliswe kwinqanaba elithile lamandla, njenge '' 500 watt electric bike '' okanye '' 250 watt ebike conversion kit '', ukanti ngokufuthi eli nqanaba lamandla liyalahlekisa okanye lilungile kucace gca. Ingxaki kukuba abavelisi abayisebenzisi imigangatho efanayo ukubiza ii-motors zabo, kwaye abathengi bahlala bengaqondi umahluko.
Masiqale ngezinye iinkcazo kunye nesifundo se-physics. I '' watt '' iyunithi yamandla, ebizwa ngokuba yiNjineli yaseScotland uJames Watt.
IiWatts zinokusetyenziselwa ukulinganisa ukuphuma kwamandla (okanye okokufaka) komatshini, njengemoto yombane kwi-ebike yakho. Inani leewatthi ezisetyenziswe yimoto yombane nangawuphi na umzuzu zilingana nevolthi ebonelelwe yibhetri iphindaphindwe ngokuhamba okukhoyo ukusuka kwibhetri ukuya kwimoto. Ke imoto ebike eqhagamshelwe kwibhetri ye-24V ebonelelwa ngee-10 amps zangoku ziya kunikwa amandla kwi-24 * 10 = 240 watts.
Njengoko ubona, ukubala amandla aphezulu e-ebike kulula. Uphindaphinda nje amandla ombane webhetri ngobuninzi obukhoyo ngoku obunokubamba i-ebike. Elona zinga liphezulu langoku limiselwe ngumlawuli we-ebike, kwaye ihlala ihlala phakathi kwe-15-30 amps. I-ebike enebhetri ye-48V kunye ne-20 amp peak isilawuli iya kuba nakho ukubiza ii-watts ezingama-960 zamandla akhawulezileyo.
Yilapho izinto ziba nzima khona, kuba abavelisi be-ebike abasoloko belinganisa iindawo zabo ngale ndlela.
Ubuxoki! Inkohliso! Ukunyelisa!
Oku kwenzeka ngenxa yezizathu ezininzi. Isizathu esiqhelekileyo kukukrazula imithetho yokungenisa elizweni. Amazwe amaninzi aseYurophu anciphisa ukungenisa ngaphakathi kwiibhayisikile zombane ezinemoto elinganiswe kuma-watts angama-250 okanye ngaphantsi. I-watts ezingama-250 ayinamandla amakhulu ngokwemigangatho ye-ebike. Abaqhubi beebhayisikile abaziingcali banokubeka ngaphezulu kweewatts ezingama-400 kumandla omlenze kuphela.
Ke ukuze bacoce iibhayisikile zabo zombane zokungenisa kumazwe amaninzi kangangoko kunokwenzeka, abavelisi abaninzi beebike bayalinganisa izinto kwii-ebikes zabo ezisezantsi kakhulu kunoko bakuko ngokwenyani.
Dibana nee-Motors ezingama-250 watt.
Nanku umzekelo obalaseleyo wekhithi yokuguqula ibhayisekile yombane eyi-250 watt. Iza nazo zonke iinxalenye ngaphandle kwebhetri, imoto entle esemgangathweni elinganiswe ngumthengisi njengee-watts ezingama-250 kunye nexabiso elihle malunga ne- $ 250 kubandakanya ukuhambisa. Kodwa xa sijonga ukubalula, sibona umlawuli we-36V enomda wangoku we-15A. Ukwenza izibalo kusibonisa ukuba i-36V * 15A = 540 incopho yeewat.
Oku kuqheleke kakhulu kwishishini. Ii-Ebike ezithengiswa nge-250 watt motors zihlala ziza zisemgangathweni ngeebhetri ezingama-36V kunye nabalawuli abali-15 okanye abangama-20 amp. Njengoko sibonile, umlawuli we-15 amp uya kuthetha ukuba owona mandla aphezulu obonelelwe kwimoto usondele kwi-watts ezingama-540 kwaye umlawuli wama-20 amp uya kuba ngaphezulu kwe-700 watts.
Ewe, "250 watts" ituchus yam!
Ngaba abavelisi beebike bahamba njani noku? Enye indlela kukulinganisa imoto "ngamandla aqhubekayo" endaweni yamandla "aphezulu". Umahluko phakathi kwamandla aqhubekayo kunye namandla aphezulu kukuba amandla aqhubekayo ngokuthetha amandla ombane unokuphatha ngokukhuselekileyo ixesha elingenammiselo ngaphandle komonakalo okanye ubushushu bemoto. Imoto "eyi-250 watt eqhubekayo", ithiyori, inokuqhuba ngonaphakade kwii-watts ezingama-250 ngaphandle kokufudumeza, kodwa nawaphi na amandla angaphaya anokuyibangela ukuba ekugqibeleni igqibe ubushushu. Ukuba imoto iyinyani eyi-250 ye-watt yemoto ngenkcazo, ukuqhuba le moto kwi-watts ezingama-251 kuya kuthi ekugqibeleni kuyenze ibashushu.
Ngaba kulungile ukuba iinkampani ze-ebike zilinganise iimoto zazo ngale ndlela? Ngokobuchwephesha ewe, ukuba amanani achanekile. Kodwa ixesha elininzi iimoto ezingama- “250 watt eqhubekayo” zinokuphatha ii-watts ezingama-250 ngokuqhubekekayo, oko kuthetha ukuba indibano yamagama ayichanekanga kwaye iyalahlekisa.
Ingxaki apha ayisiyonto yokuziphatha phantsi kweenkcukacha ze-ebike (eli lelinye lamaxesha odla ngokufumana ngaphezulu kunokuba uhlawule), kukuba oku kuhlala kubaphazamisa abathengi kwaye kwenza ukuthelekisa iinjini ezahlukeneyo kube nzima ngakumbi.
i "250 watt" yemoto endiyigijimayo kuma 500 watts
Ungawasebenzisa njani ngokufanelekileyo amandla okulinganisa?
Xa uthelekisa ii-ebike okanye iikiti ze-ebike, kubalulekile ukuba wazi kuqala kunazo zonke ukuba uthelekisa amandla aqhubekayo okanye aphezulu. Xa umntu ecebisa ukuba umkhweli we-220 lb angadinga ubuncinci be-1,000 watt motor, uhlala ethetha i-watts ezili-1 zamandla aphezulu, njengakwisixa samandla i-ebike ekufuneka ikwazi ukuvelisa ukuqhuba umkhweli unyuke induli.
Ikhithi yokuguqula ibhayisekile yombane eyi-500 watt inokudweliswa njengekhithi ye-watt engama-500, ukanti ukujonga kufutshane kungabonisa ukuba ikiti iza nebhetri ye-48V kunye nomlawuli we-20 amp peak. Izibalo zisibonisa ukuba le khithi inako ukubeka i-48V x 20A = i-960 watts, ngokukodwa i-1,000 watt kit. Yintoni enokubonakala ngathi ibuthathaka kakhulu (ipapashwe njengee-watts ezingama-500) eneneni ikwi-watt peak kit egqibeleleyo, ekhwele umkhweli wethu oyi-220 lb ebesisebenzisa kumzekelo ongentla.
Abenzi bomthetho abazi nto malunga neebikes (phakathi kwezinye izinto)
Lo ngumzekelo onomdla wendlela engenantsingiselo yemithetho emininzi yebhayisikile yombane. Ukunciphisa umda wokubakho kweemoto ze-ebike akuthethi ukuba kunokubanamandla kangakanani. Nangona imoto iphawulwe njengama-watts angama-250 (kwaye nokuba ingaba yinyani eyi-250 watt motor), nabani na onokuyidibanisa nebhetri engama-48V kwaye asebenzise ii-amps ezingama-20 kwimoto ukufezekisa i-watts ezili-1 zamandla. Ewe oku ekugqibeleni kungonakalisa okanye kutshabalalise i-motor, kodwa isabonisa ukuba inokwenzeka njani ngokwembono ebonakalayo.
Ngapha koko, iimoto eziqhuba ngokuthe ngqo ezinje ngeLizwekazi leThoba zihlala zidweliswa njenge-500 okanye i-1,000 watt motors, kodwa abantu abaninzi baye baphumelela ukuziqhuba ngaphezulu kweewatthi ezingama-3 000 ngokumba iipleyiti zokugubungela ukubonelela ukupholisa komoya kwimoto. Olunye uhlengahlengiso olunjengokunyusa isilinganisi seengcingo eziphethe amandla ukuya kumjikelo wobhedu kunokunceda ekwandiseni amandla ombane aluncedo kwezi motors zingaphantsi.
Le mizekelo kufuneka yomeleze umyalezo ogodukayo apha: xa ujonge ibhayisekile yombane okanye ikiti yokuguqula i-ebike, soloko ubala ii-watts eziphakamileyo engqondweni yakho (volts x amps) ukwenza uthelekiso olufanelekileyo lwamandla onokuwalindela ngaphandle nakuphi na ukuseta kwe-ebike. Ngale ndlela uya kwazi ukuba loluphi uhlobo lwenqanaba lamandla oza kulifumana xa sele ukulungele ukujija umcephe.